बर्खास्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध राजदुत शर्मा सर्वोच्चमा :: Press Chautari ::
बर्खास्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध राजदुत शर्मा सर्वोच्चमा
१४ असोज, काठमाडौं । आफूहरुलाई कतारका लागि नेपालको राजदूत पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध डा. मायाकुमारी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
कतारमै रहनुभएकी डा. शर्माको वारेस बनेर सोमबार भक्तबहादुर कुँवरले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा शर्माले आफूलाई कुनै आधार विना गैरकानूनी ढंगले आफूलाई सरकारले हटाएको भन्दै निर्णय खारेजको माग गर्नु भएको छ ।
‘मलाई नियुक्त गर्ने निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय हो । मैले प्राप्त गरेको नियुक्ति समेत राष्ट्रपति कार्यालयबाटै हो’ रिटमा भनिएको छ(’कानूनअनुसार पदमुक्त राष्ट्रपति कार्यालयबाट गर्नुपर्नेमा कुनै आधार र कारणविना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सुनुवाइको मौकासमेत नदिएकाले मलाई बखास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र परराष्ट्रको पत्रसमेत बदर गरी पाउँ ।’
रिटमा मायाकुमारीले हाल आफूलाई कतारका लागि नेपाली राजदूतको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्नुभएको छ । यसअघि आइतबार सर्वोच्चले शर्माको रिट प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो ।
मंगलवार, २०७० आश्विन १४ गते ०४:५७ / Tuesday, Oct 01, 2013 4:57 am